Qaadashada muuqaalada ka timaada Juquraafiga ilaa Bentley Map - Geofumadas
Mee, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Waqtigaan ka hor waxaan ka wada hadalnay waxa ay macnaheedu tahay in ay ka dhignaan Microstation Geographics Bentley Map, waxaan ka wada hadalnay sida labadaba labadaba qorshayaasha iyo faa'iidooyinka muhiimka ah ee Bentley Map. Horeyba boostada ayaan ugu hadlay sida ugu macquulsan haajiraan dhismaha ee mashruuca, kiiskan waxaan rabaa in aan calaliyo sida loo hirgeliyo khariidado leh sifooyinka juqraafi ah si ay uqalaan fasalada xfm.
Inkastoo, qaab dhismeedka mashruuca la dhisay Geographics Legacy laga soo dhoofin karo Bentley Map, macnaheedu maaha in sifooyinka sheyga ay aqoonsan doonaan mashruuca cusub, waa in loo xilsaaro.
Sidee Cilmi-baadhistu u shaqeysay
Nidaamka Juquraafi ahaan sheyga oo loo marayo MSLINK wuxuu urur u lahaa diiwaanka, taas oo ahayd dhammaan walxaha lahaa, isku xirka nooca OLE. MSLINK waxay la xiriirtaa shaxanka sawirada dgn feylka iyada oo loo marayo MAPNAME miiska MAPS, iyo iyada oo loo marayo MSCATALOG si loo aqoonsado meesha laga helo xogta Shahaadada. Waxaa intaa dheer, waxaa jiray labo miisas oo loogu talagalay mashaariic isku dheelitiran kuwaas oo inta badan la qaaday UG ka hor.
Waxaa intaa dheer sheyga wuxuu lahaa FEATURE, inkasta oo tani aysan ahayn mid firfircooni ah, markaad meel dhigto waxa ay heshay sifooyinka lagu qeexay sifahaan (oo ka mid ah amarrada) taasina waxay la xiriirtay miiska CATEGORY. Sheyga wuxuu yeelan karaa wax ka badan hal dabeecad oo mudnaanta koowaad ahayd midka lagu qoray qaabka ugu caansan, taasoo ah FEATURE iyo walxo kale oo ku xiran saldhigga ayaa lala xiriiriyay miiska MSCATALOG halkaas oo loo qoondeeyey xarun taas oo ah xuddunta wax kasta.
Kadibna faylka index.dgn waxay ku hayaan qaababka khariidadaha ku xiran, halkan khariidaduhu waxay heleen MAPID, markaa miis kasta oo la xidhiidha Geographics wuxuu lahaa ugu yaraan laba qaybood: MSLINK (lambarka garaafka, waa mid khaas ah oo khariidad walba ah) oo markasta ah furaha koowaad iyo MAPID ( khariidadda la keydiyay, waa mid gaar ah oo ku yaal liiska khariidada) kaas oo ah furaha shisheeye ee MAPS miiska.
Sidaa daraadeed qaabka kaliya ee loola xiriiri lahaa xogta waxay ahayd iyadoo lagu xiran yahay saldhigga, iyo hawlaha la qabtay iyo bahalka sida loo cusbooneysiiyo jadwalka warbixinta ku saabsan shayga sida goobta, wareega iyo isuduwaha si uu daabacaadu u ogaado sida loo muujiyo. Waxaa sidoo kale laga soo saari karaa calaamadaha taas oo ku dhacday sheyga xogta laga helay xogta la xidhiidha shayga la xidhiidha.
Waxay u muuqataa mid sahlan, laakiin waxay igu kacday adduunka si ay uga fahamto MGE, wax walbana waxa weeye in qiiqa sigaarku aanu wax badan ka caawinayn mashruuca Bentley Map.
Sida uu u shaqeeyo Bentley Map
Mashruuca Mashruuca Bentley wuxuu hayaa isla caqligal ah Qaybta, sifooyinka, khariidadda, sheyga; laakiin kiiskan, adoo badalaya qaabka xiriirka xogta OLE by XML inta badan isbedelka.
Xaaladdan oo kale, sheyga ku yaal khariidada ayaa ku keydsan kara xogta (isla dgn), taas oo la fahmi karo sida xml ama sida Bentley ugu yeerayo wfm. Kadibna waxuu isbeddelayaa in shayada hadda jira ay yeelan karaan hal hanti, oo ay si joogto ah ula xiriiraan sharciyada qulqulka. ka hor intaanay noqon khadka isku midka ah xuduudaha manzanero iyo sidoo kale xadadka hantida, hadda waa inay noqdaan walxo gooni ah laakiin la leh ururoolo fayowoloji sida marka wax laga beddelo midka kale mid kale.
Sidaa daraadeed is dhexgalka xogta, waa guji sahlan, haddii ay ku xiran tahay mashruuca, waxaad akhrin kartaa wax kasta oo laga tagay xfm. Ka dibna xakamaynta calaamadaha iyo sifooyinka sifooyinka, iyada oo kaliya oo isbeddel ka sameynaya Maamulaha Geospatial. Ka hor inta, samaynta isbeddelidu waxay ahayd aragti keliya oo firfircoon iyada oo loo marayo Daabacaadaha laakiin sheyga looga baahan yahay in laga saaro oo dib loogu soo celiyo sifo.
Intaa waxaa dheer Bentley Map waxay bixisaa fursado lagu abuuro qaabab xog ah, hababka xiga, amarrada la xidhiidha (hababka / hawlaha / domains / shuruudaha / warbixinnada) iyo burcad-badeeda kale ee fududeynaya dhismaha xogta.
Waxyaabo badan ma badalin, taasina waxay tahay waxa ay isticmaalaan ESRI, oo cagaarka qiiqa qaata waxay qaadataa caloosha oo dheefshiidka.
Hadda, u hayaamida dhismaha mashruuc waa suurogal, kadibna ku dar shaqeynaya Maamulaha Geospatial, kaas oo diyaar u ah inuu sii wado xogta quudinta, laakiin dhibaatada waa:
Khariidadaha waxaa lagu dhisay Geographics?
Wixii Bentley Tani ma aysan qaabayn wax kasta oo farshaxan kaas oo u oggolaanaya sheyga wax ka beddelaya mashruuca Legacy ilaa xfm ... Waa maxay fuck!
Soo jeedinta ah in aan soo jeedin doono waa waxa aan u arko inay tahay mid macquul ah, ka dib markii la sheekeysto saaxiib la ii soo xiriiray Chile, ka dib markii emails dhowr ah aan ku nimid qadiimiga hore ee Geofumada.
Tallaabada 1. Soo dhoofinta qaabeynta faylasha
Laga soo bilaabo mashruuca Juqraafi, furan, ikhtiyaarka ah dhoofinta sifooyinka si loo qaabeeyo faylasha ayaa la doortaa (faylka / dhoofinta / SHP). Tani waa in la sameeyaa mid kasta feature ku yaal khariidada.
Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la dagaallamo wax yar marka shayadu yihiin centroid / xuduud, maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan u ah inay u gudubto qaabab iyaga oo u wareejinaya xiriirka iyaga.
Sidoo kale dhoofinta waxaa loo sameyn karaa Mapinfo, sida ku xusan doorashadaada.
Tallaabada 2. Ka soo dhoofinta Bentley Map
Hadda, laga bilaabo Mashruuca Khariidadda Bentley, waxaan dooranay ikhtiyaarka soo dejinta (Noocyada Macluumaadka / Soo dejinta / GIS), iyada oo arrintan daaqadu ka muuqato interoperability, badhanka midigta ayaa loo sameeyaa gudaha soo dejinta waana la doortaa soo dejinta cusub.
Iyada oo farhanka saxda ah ee ku yaal Imoport1 waxaad dooran kartaa faylka ama buugga dhamaystiran. Waa suurtagal in la soo dejiyo qaabeeya faylashaama Faylasha mapinfo nooca mif iyo tab.
Markaad taabato fasalka muuqaalka Waxaan arki karnaa in suurtogal ah in la xushmeeyo heerka, midabka, daahfurnaanta iyo guryaha kale.
Si aad ugu qorto feature waxa naga xiiseynaya waa ku filan in lagu magacaabo lakabka (heerka).
Sida uu Memín sheegay in tashiilka hore ee Mexican:
Tani waa in loo sameeyaa qaab kasta oo khariidad kasta ah ee qayb kasta oo ka mid ah mashruuc kasta.
Tani waa suurtogal in la badbaadiyo dejinta, sidaas darteed waxaa loo yaqaan kaliya faylka faylka ama faylka. Xaqiiqadu waxay tahay in ay jirto shaqo adag oo lagu badalayo xogta, gaar ahaan haddii ay ku jiraan faylal gaar ah. Nooga dhicin inaad ka shaqeyso vba in .NET for aut
omatizar habka halkii fool hawshan on cagta, taas oo keeni kartaa in ka badan hal maalin maalmaha ka mid ismiidaamin ah. dhibaatada Toral waa in si ay u sameeyaan u boodboodi waxay sii wadaan in ay ku tiirsan yihiin khaas ah (oo aad sigaar cabbin) in la fahmo in brojektikani Bentley Map iyo talo Geographics, waxaa suurto gal ah, laakiin codsiyada waa in aanay noqon sidii xidiguhu (qireen, labadaba waa) isticmaalayaasha caadiga ah.
Xitaa xanuun badan, haddii macluumaadka lagu keydiyay DNA-da asalka ah taariikhda... faylka cusubi ma lahaan doono taariikh.
Xalalka aan imid waa wax macquul ah haddii ay jiraan xog yar, ama haddii lagu keydiyo kartriddo jimicsi, sidaas darteed gabagabada murugadu waa in hijrada ka socota Geographics ilaa Bentley Map aysan ahayn mid fudud, sababtoo ah isbeddelka xogta. Haddii Maamulaha Geospatial, sida aan hore u sheegay, waa ilkuhu, hijrada xogta waxay noqon kartaa xitaa xanuun badan haddii Bentley uu ka fikiro xalalka adeegsadaha aan dooneynin inuu ka baxo hal maalin ilaa tan xigta.
Markaad la sheekaysato asxaabyahanada juqraafiga ah waxay igu sameeyeen wax aan mugdi ku jirin, laakiin tan iyo maanta waa maalin jilicsan ee hoteelka quruxda leh iyo isbarbardhigga waa mid run ah, ogolaanshahaaga ayaan isticmaali doonaa:
"Looma baahna lamaanayaasha beddelka ah ...
... waxay noqon kartaa sidii mar kale bikranimadaada oo kale "
Post Previous«Previous Earth Virtual, muuqaal sawir ah April 2009
Post Next Tikidka cusub ee MexicoNext »